Diesel Generator Setï¼Ÿ - Mecca Power ကဘာလဲ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-27 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်အကြောင်းကိုအများကြီးမသိနိုင်ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်ဒီဇယ်လ်မီးစက်အစုံနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ယူပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအင်ဂျင်, Generator နှင့် Control System ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့်၎င်းကိုမီးစက်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သူ set သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် synchroned generator ကိုမောင်းနှင်ရန်အဓိကစက်ကိုအသုံးပြုသော Primeel Engine ကိုအသုံးပြုသောစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု,
Diesel Generator အစုံ၏အလုပ်လုပ်နိယာမ
အပေြာင်းဒီဇယ်မီးစက်ငါ setစင်ကြယ်သောလောင်စာအဖြစ်ဒီဇယ်နှင့်အတူပါဝါမျိုးဆက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးအစား။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုမီးစက် (ဆိုလိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဘောလုံးဘောလုံး) ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးသည့်ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြု. Kinetic Energy ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်အပူစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ Diesel Generator အစုံအပြည့်အစုံကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
3. Controller ။
Subdivision ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အခြေစိုက်စခန်း, ဒီဇယ်အင်ဂျင်, အခြေစိုက်စခန်းလောင်စာဆီဌာန, မီးစက်, Controller (Controlling Playing), Controller (Controling Playing), FAIRE: FAING: FAING: FANPES (CANGING), ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ၏လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအရမီးစက်ကိုပုံသေ။ ရွေ့လျားသည့်နောက်တွဲယာဉ်များသို့ဝေဖန်ကြသည်။ မီးစက်မှထုတ်လွှတ်သောဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်လူတို့၏အလုပ်နှင့်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအားအသံတိတ်သေတ္တာများဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ အဆိုပါယူနစ်သည်မီးစက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွင်းရှိအသံစုပ်ယူထားသောပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်ဘက်တွင်သတ္တုသေတ္တာတစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ မီးစက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်တံခါးများကိုတံခါးများ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ အသံတိတ်သေတ္တာသည်မီးစက်အစုမှရရှိသောဆူညံသံများကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကအိမ်ပြင်တွင်လည်းပါ0င်နိုင်သည်။ သေတ္တာသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မိုးရေ - အထောက်အထားများ, လူများကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်စက်ရုံခန်းမတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နေရာမရှိစေရ။ ဒီဇယ်စက်များသည်ဘုံမီးစက်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်မီးစက်အစုံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအာဏာကိုဘုံစွမ်းအားနှင့်အဆင်သင့်ပါဝါအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ Generator set တစ်ခုစီ၏စံပြစွမ်းအားသည်အများအားဖြင့် standby power ၏ 80% ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအရ, များသောအားဖြင့် Peneral Defning ကြောင့်လိုအပ်ပါကအမျိုးသားဇယားကွက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်. သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြေးရန်လိုအပ်ပါကများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောဒီဇယ်ဆီ Generator Set သည်နှစ်စဉ်အသုံးပြုသောဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ရက်အနည်းငယ်ထက်ပိုပြီးအသုံးပြုပါကအသုံးပြုသောဒီဇယ်ရောင်ချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘုံစွမ်းအင်နှင့် standby power အကြားဆက်နွယ်မှုမှာ - ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည် 100kw Diesel Generator Set နှင့် 100kw standby diesel generator set ၏ဘုံစွမ်းအင်သည် 100KW * 80% = 80kw ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 100kw ဒီဇယ်ထွန်း့စ်၏ပုံမှန်စွမ်းအားသည် 80kw ဖြစ်သည်။ အကယ်. Diesel Generator Set သည်အသံတိတ်သေတ္တာတစ်လုံးတပ်ဆင်ထားပါကမီးစက်အစုံ၏စွမ်းအားသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 10% အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည်ဒီဇယ်ဆီ Generator Set ကိုရွေးချယ်သောအခါအသံတိတ်သေတ္တာ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အပေြာင်းဒီဇယ်မီးစက်အစုံဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းအခြားအရာတစ်ခု၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးပါ0င်မှုသည်အစိတ်အပိုင်းများ၏စက်မှုဝန်နှင့်အပူ0န်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။
Diesel Engine ဆလင်ဒါတွင်လေကြောင်းလိုင်းမှ filter လုပ်ထားသောသန့်ရှင်းသောလေထုသည်လောင်စာဆီ injector မှပက်ဖြန်းထားသည့်ဖိအားကိုဖိအားမြင့်မားသောဖိအားပေးမှုဒီဇယ်များနှင့်အပြည့်အဝရောနှောထားသည်။ ပစ္စတင်၏အထက်သို့ extrusion အရအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချပြီးအပူချိန်သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာပြီးဒီဇယ်ကိုစက်နှိုးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇယ်ကိုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်, ဆလင်ဒါတစ်ခုစီသည်အမိန့်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
MECCA Power ၏ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံများသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်သည်။ MECCA Power သည်သုံးစွဲသူများအားဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်ရန်အစုံများနှင့်အတူဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်
1500RPM ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ Cummins ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူအစုံ 1800RPM ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ အသံတိတ်ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူအစုံ Trailer သည်ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သောအစုံ Cummins ဒီဇယ်ဆီမီးစက်တပ်ဆင်ထားသည်